Good Self adịzi skuuta With APP - Jomo Technology Co., Ltd
E nwere ọtụtụ unlicensed hoverboards si n'ebe dị na ahịa, na ị na-ahọrọ na-eme ka n'aka na ị ga-enwe otu nke bụ ala na-agba ịnyịnya n'ihi na ị ma ọ bụ gị na na. Ndị a hoverboards dị site kpamkpam dị iche iche sịrị na dị iche iche size na ụdị ka izute onye chọrọ. The ọkà okwu n'ime hoverboard segway na-encased na carbon fible kpuchie mputa. Bilie gị chọrọ hoverboard onwe onye na-guzozie electric scooters na gị n'ọnụ ụzọ site ịtụ anyị nnukwu oke, Koowheel E1 ukwuu a omenala electric skuta.
Firstly, ọ bụ Patent Innovative fashionable jụụ imewe site Koowheel.
Nke abuo, o nwere Free APP idekọ na ịkọrọ gị ọ bụla njem, ịgbanwe ntọala.
Thirdly, Ikanam ngosi ihuenyo kpamkpam egosi batrị na-agba. All atụmatụ ndị a dị mma maka ụmụaka na ndị okenye. Ngwaahịa a bụ eleghị anya, ihe kasị ukwuu hoverboards na m mgbe hụrụ na-abịa na-eju ndị na-eme ka ọ na adabara ya ihe mgbaru ọsọ. Mgbe e mesịrị, anyị na-na nyochaa ndị hoverboards na-enye ndị kasị dị irè mkpebi.
Kasị Mini Segway hoverboards nwere dị iche iche gbapụrụ ọsọ na ibu ibu. Na-ekwu okwu banyere ijeụkwụ na ịdị iche iche nke hoverboard, onye a na-egosi a max ọsọ nke 22km / h. Ọ nwere ike ikekwe mara 80-100kg ibu na ya. Private njem ugbu a na-aghọ extra ụtọ na vasatail na iwebata onwe adịzi scooters/ hoverboards . Ike bụ kacha enyi nke ụmụ mmadụ na nke ahụ rụọ ụzọ ndụ ma na-enye ihe nhọrọ na-achọpụta a ohuru akụkụ nke ụwa na onye ọ bụla nzọụkwụ.
On a Self adịzi Scooters nnyocha web site, anyị na-na ọkọdọ enyocha ndị a mgbere nke pụrụ ịdị ịdabere na-enye ezi mma mbadamba. The-echebe ejiji na oge na-abịa ọzọ, dị na ahịa. Ịgbanwee n'aka ekpe ma ọ bụ kwesịrị ekwesị na-atụgharị, ọ bụ ịgbanwee azụ laa azu. Scooters e rere maka akpan akpan onye Njirimara maka ojiji nke ụmụaka. Otú ọ dị, site na onwe m echiche, ụfọdụ nhọrọ pụrụ inye aka mmadụ n'ụkọ ma ọ bụghị ha niile. Ọ bụla ala karịa na, na purchaser lezie anya - i nwekwara ike ịbụ ewekarị ịzụ a lemon. NEW Update: lezie anya ịzụ cheaply mere Koowheel knockoffs! Ebe ụfọdụ scooters anwa iji hụ na gị na nchekwa site na-enye gị na a ejima adịzi usoro, ị pụrụ iji hụ na gị nche ọbụna n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-eche na gị enterprise kọrọ na n'oge a vibe, i nwere ike mfe ịgbanwe na site ịzụ a di na nwunye nke onwe adịzi scooters. Ị pụrụ ọbụna ịmụta nkuku na a n'ezie oké ọsọ na ihe omume ị na-akụziri nnọọ akụkụ ka n'akụkụ.
Post oge: Nov-30-2017